. * . * . ကြယ်တစင်း . * . * .: ဆုံးရှုံးခြင်း မှတ်တမ်း
. * . * . ကြယ်တစင်း . * . * .
ကြယ်တစင်းရဲ့ သက်တမ်းတခုအတိုင်းပါပဲ .. ဖြစ်တည်မယ် ကြွေလွင့်မယ် .. သူ တည်ရှိခြင်း မရှိခြင်းက ဘယ်သူ့အတွက်မှ အရေးမပါလှပါဘူး ..
မထင်မှတ်တဲ့အချိန်မှာ မထင်မှတ်တဲ့ ထောင့်က ရိုက်ချက်တခုကြောင့် ယိုင်လဲသွားရမတဲ့လား ..
ရုတ်တရက် ကြားလိုက်ရတဲ့ စကားလေးတခွန်းကြောင့် သူမ မိုက်ခနဲ တချက် ဖြစ်သွားရတယ် .. "ကို့ကို သူမဆီ ပြန်သွားခွင့်ပေးပါ" တဲ့လား ..
ကျမက သူ့အပေါ် လွမ်းဆွတ်နေတဲ့ အချိန်မှာ သူကတော့ ကျမမဟုတ်တဲ့ တခြားတယောက်ကို သတိရ တမ်းတနေပါတယ်တဲ့ .. ကျမရဲ့ စိတ်ကူး အိပ်မက်တွေမှာ သူနဲ့ နှစ်ကိုယ်တူဘ၀ဆိုတာကို တွေးတောနေချိန်မှာ သူကတော့ မတည်ဆောက်လိုက်ရတဲ့ အိပ်မက်ဟောင်းတခုကို ပုံဖော်လွမ်းဆွတ်နေခဲ့တယ်ပေါ့ .. ကျမရဲ့ အတွေးမှာ သူနဲ့ နီးဖို့ ကြိုးစားရင်း နီးစပ်ခွင့်ရတော့မယ်လို့ ပျော်ရွှင်နေမိချိန်မှာ သူကတော့ ဝေးကွာသွားခဲ့တဲ့ မျှော်လင့်ချက်တစုံတခုကို ရင်ဝယ်ပိုက်လို့ အပြေးအလွှား လိုက်လံ ဖမ်းဆုတ်နေခဲ့တာပဲ ..
သူမကိုယ်တိုင်က ညံ့နေခဲ့တာပါ ..
နူးညံ့တဲ့ အပြုံးတခုကို ပိုင်ဆိုင်တဲ့ သူ့ကို စတွေ့တွေ့ချင်း ရင်ခုန်ခဲ့တဲ့ ကျမ အစတည်းက ရှုံးနိမ့်ခဲ့တာပါ .. ပိုဆိုးတာက သူ့အပြုံးကို ပိုင်ဆိုင်သူက ရှိနှင့်နေခဲ့ပြီ .. ဒါထက်ပိုဆိုးတာက ပိုင်ရှင်က ကျမ သူငယ်ချင်းတဲ့လေ ..
ဒဏ်ရာကို လူမသိ သူမသိကုစား
ရေးလက်စ ဒိုင်ယာရီကို အဆုံးမသတ်ခင် မဟုတ်လည်း အဆုံးသတ်ပြီးတာနဲ့ မြင်ယောင်နေတဲ့ အပြုံးတခုကို အပြီးအပိုင် စွန့်လွှတ်လိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်တခုနဲ့တင် သူမ ရင်တွေ နာကျင်နေတတ်ပြီလေ .. ဖြစ်သင့်တဲ့အရာတခုမို့ သူမ အဆုံးသတ်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားရမယ် .. ကံတရားကိုသာ အပြစ်တင်လိုက်ပါ ..
လိုချင်စိတ်ရှိခဲ့တာ လူဆိုတဲ့ အတ္တကြောင့်ပါ ..
စိတ်ချပါ .. ကျမကလေ သူ့အပြုံးကို မြင်ယုံနဲ့ ကျေနပ်နေခဲ့တာတဲ့ .. တခါတလေတော့လည်း ပိုင်ဆိုင်ချင်မိတာပေါ့ကွယ် ..
နှစ်သိမ့်ပေးခွင့်တော့ ရှိလိမ့်မယ် ..
ကျမ ကြိုးစားနှစ်သိမ့်ပေးမှာပေါ့ .. သူသာ လိုအပ်မယ်ဆိုရင်လေ .. သူ့မျက်ရည်တွေအတွက် စိတ်မကောင်းပေမယ့် ကျမစိတ်တွေ မဖြူစင်နေခဲ့ဘူး ..
ခပ်ပြုံးပြုံးနေတတ်တဲ့ သူ့နှုတ်ခမ်းတွေ ကိုပဲ သတိထားမိတော့ သူ့မျက်ဝန်းက ၀မ်းနည်းမှုကို သတိမထားမိဘူး .. တမင် မသိချင်ယောင်ဆောင်တယ်လည်း ပြောနိုင်ပါတယ် .. ဒီလိုလည်း ကျမက အတ္တကို ရှေ့တန်းတင်တတ်ခဲ့တယ်လေ ..
အဖြေတခုက ရှေ့မှာ လှောင်ပြောင်လို့
ငါကလည်း အရှုံးတွေ တပွေ့တပိုက်နဲ့ ..
ပြင်ဆင်ခွင့်ကို တောင်းဆိုခွင့်မရှိသူတယောက် အတွက် ပေးလာတဲ့ အရှုံးကိုပဲ တသက်စာ ..
ရေးသားသူ မိုးခါး at 2/11/2010 04:36:00 AM
အကြောင်းအရာခွဲ ၀တ္တုတို, အတွေး စိတ်ကူး
အရာအားလုံး မသိသေးသလို သိနေသလောက်လေးတောင် ဖြောင့်အောင် မကျင့်ကြံနိုင်သေးဘူး
tag game (36)
ကဗျာ ထင်တယ် (38)
ရင်ထဲရှိသော မြို့လေးများ (4)
ရုပ်ရှင်၊ ဗီဒီယို၊ စာအုပ် review (3)
သူငယ်ချင်း ၂ယောက် (1)
ဟိုမရောက် ဒီမရောက် (7)
ဟိုရောက် ဒီရောက် (41)
အတွေး စိတ်ကူး (18)
ကျမနှင့် ချစ်သော ........